Talyaaniga oo Soomaaliya ka caawinaya dhismaha ciidanka cirka | Building Momentum
Talyaaniga oo Soomaaliya ka caawinaya dhismaha ciidanka cirka
Wasaaradda gaashaandhigga Talyaaniga ayaa maanta u ballan-qaaday xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya inay ka caawineyso dib u soo nooleynta ciidankii cirka ee Soomaaliya, caawinta iyo tababarista ciidanka xoogga dalka iyo sidii ay ciidanku uga qeyb qaadan lahaayeen qorshaha xasilinta dalka.
Arrintaas ayaa timid kaddib markii uu raysul wasaaraha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali maanta kulan la qaatay wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga Gianpaolo Di Paola oo ay ka wada-hadleen xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha ammaanka iyo sidii ay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Talyaaniga wada-shaqeyn ula yeelan lahayd wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga, Gianpaolo Di Paola ayaa sheegay inay dowladdiisu diyaar u tahay in la sameeyo labo guddi oo ay yeelanayaan labada wasaaradood, kuwaas oo ka wada shaqeyn doona xiriirka gaashaandhigga ee labada dal. Di Paola wuxuu xaqiijiyay inay dowladda Talyaaniga si aad ay u daneyneyso arrimaha Soomaaliya ayna ka taageeri doonto dhinacyo badan.
Raysul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dalka Talyaaniga ku jooga booqasho rasmi ah ayaa wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga uga warbixiyay horumarka ay xukuumaddiisu ka sameysay soo celinta amniga iyo inay la wareegtay magaalada Muqdisho, deegaanno ka tirsan Jubbooyinka, Gedo iyo Hiiraan oo ay horay ugu sugnayd Al-Shabaab.
Wasiirka gaashaandhigga DKMG oo u safray Talyaaniga, 2011/01/26
Ra’isul wasaarayaasha Soomaaliya iyo Talyaaniga oo ka wadahadlay xaaladda Soomaaliya, 2011/01/21